थापस महाधिवेशनको भ्रम र यथार्थ – Tharuwan.com
September 10, 2019 August 25, 2021 admin
थारु पत्रकार संघमा पूर्व पश्चिम विवाद हुँदै होइन । हुन्थ्यो भने तेस्रो महाधिवेशनमा बारा जिल्लाका मदन चौधरी अध्यक्ष हुने थिएनन् । उदयपुरका किशोर चौधरी महासचिव हुने थिएन, बाराकै कोषाध्यक्ष हुने थिएन। त्यतिबेला त कसैको मुखबाट थापसमा पूर्वको कमिटी बन्यो भन्ने आरोप सुनिएन। अहिले पूर्वपश्चिमको संकुचित विचार किन? थापसमा पूर्वपश्चिम विवाद जबरजस्त रुपमा भित्राइएको हो । उदयपुरका किशोर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा कैलाली कञ्चनपुरमा पनि चलेको हो । दाङका सन्तोष दहितलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा अन्यत्र पनि चलेको थियो होला । किशोर र सन्तोष, अध्यक्ष पदका प्रत्यासी हुन् भन्ने कुरा बाहिरिएकाले यी दुई जनाको चर्चा बढी चलेको थियो ।
लक्की चौधरीले आरोप लगाउनेहरुको मुख बन्द गर्नेगरी जवाफ दिएका छन् । ‘संस्था नवीकरण गर्ने जिम्मा संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको हो कि सल्लाहकारको ? सहमतिको प्रस्तावको अनेक विकल्प दिँदा पनि नमान्ने, टाङ लडाउने अनि सहमति भएन भन्ने ? महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सूची बनाएर महाधिवेशनमा पेश गर्ने जिम्मा कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको हो कि सल्लाहकारहरुको ? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अरुलाई आरोप लगाउने ? निर्वाचनमा नजाउँ, मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव सबैभन्दा धेरै सल्लाहकारको थियो । तर आवेग र गलत निर्णयका कारण केही पत्रकार समिति बाहिरै रहनु पर्यो । टिप्पणी र आरोप लगाउन सजिलो हुन्छ । काम गरेर देखाउन गाह्रो । अझै केही बिग्रेको छैन । सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सकिन्छ ।’
लेखक थापसको निवर्तमान सचिव हुन्।